कसरी म्याड्रिड र बार्सिलोना मा भ्यालेन्टाइन दिवस मनाउने यात्रा समाचार
म्याड्रिड र बार्सिलोना मा भ्यालेन्टाइन दिवस कसरी मनाउने
मारिएला क्यारिल | | बार्सिलोना, मैड्रिड, रोमान्टिक
फेब्रुअरी महिनाको सबैभन्दा रोमान्टिक महिना हो जुन यो मनाइन्छ वेलेंटाइन दिवस, एक दिन जोडीको प्रेम मनाउन। केहि समयको लागि, उत्सव विश्वव्यापी उपभोक्तावादको प्रिय बन्न पुगेको छ, त्यसैले म भन्न चाहन्छु कि फेब्रुअरी १ ​​on मा सारा विश्व बेलुन, चकलेट बोन र रातो हृदयले सजाइएको छ।
गतिविधिहरू, पैदल र विशेष भ्यालेन्टाइन मेनू शहरहरूमा देखा पर्दछ। यो क्लासिक हो जुन कहिले पनि असफल हुँदैन र कहिलेकाँही उत्तम अवसरहरूमा जानको लागि उत्तम अवसर जुन हामीलाई थाहा हुँदैन अन्यथा। त्यसो भए,हामी म्याड्रिड र बार्सिलोना भ्यालेन्टाइन डे मा के गर्न सक्छौं? आउनुहोस् हामी यी दुई लोकप्रिय स्पेनिश शहरहरूको रोमान्टिक प्रस्तावहरू के हो हेरौं।
1 भ्यालेन्टाइन डे, एक सानो इतिहास
2 म्याड्रिडमा भ्यालेन्टाइन डे
3 बार्सिलोना मा भ्यालेन्टाइन दिवस
भ्यालेन्टाइन डे, एक सानो इतिहास
हामी के मनाइरहेका छौं? राम्रो यस उत्सवको मूर्तिपूजक उत्पत्ति भएको छभन्नुपर्दा इसाईमत हुनु भन्दा पहिले र यो क्याथोलिक चर्चले आफ्नो इतिहासभरि समाहित गरेको धेरै मूर्तिपूजक चाडहरू मध्ये अर्को हो। भ्यालेन्टाइन त्यहाँ बस्ने एक पादरी थिए दोस्रो शताब्दीतिर रोम, moment जब युवा पुरुषहरूको लागि विवाह निषेध गरिएको छ किनकि सम्राटले त्यो परिवारलाई परिवारका स्वास्नी, छोरा र छोरी नभएका केटाकेटीहरू भन्दा राम्रो सैनिक भएको ठाने।
कथा भन्छ कि भ्यालेन्टाइनले सम्राटको अवहेलना गरे र गोप्य रूपमा विवाह समारोहहरू मनाउन थाले। सम्राटले फेला पारे र भ्यालेन्टाइन शहरमा धेरै लोकप्रिय भएको कारण उनले उनलाई बोलाउने निर्णय गरे। यद्यपि उनले यो सुने तर उनले जेल पठाउन समाप्त गरे। त्यहाँ उसले एक जना गार्डकी छोरीलाई दृष्टि फर्काएर आश्चर्यकर्म गरे जसले सम्भवतः इसाई धर्ममा परिवर्तन गरे। केटीको नाम जुलिया थियो र जब भ्यालेन्टाइनको मृत्यु भयो उनले आफ्नो चिहान गुलाबी बदामको फूलले सजाई, यसैले रातो र गुलाबी रंगको प्रयोग।
जब तपाईं यी कथाहरू सुन्नुहुन्छ, तपाईंलाई निश्चित रूपमा थाहा छैन कति झूटा र कति सत्य छ, तर यो सुन्दर छ, होइन र? अधिक आधुनिक ईतिहासको बारेमा, उत्सवको इतिहास आफैंमा, यो १ th औं शताब्दीमा शुरु हुन्छ हृदयको साथ केही कार्डको बिक्रीको साथ। त्यहाँबाट, भ्यालेन्टाइन डेले संसार र आज जित्यो यो एउटा पार्टी हो जुन देशहरू र संस्कृतिहरूलाई पार गर्‍यो यो पश्चिम र विभिन्न संस्करणहरूमा मनाइन्छ, एशियामा पनि।
म्याड्रिडमा भ्यालेन्टाइन डे
स्पेनको राजधानी म्याड्रिड, यो भ्यालेन्टाइन दिवस मनाउन यो एक धेरै विविध प्रस्ताव छ। यदि मौसम राम्रो छ भने, तपाईं सक्नुहुन्छ तपाईंको साथीसँग रेटिरो पार्कको ठूलो पोखरीमा हिंड्नुहोस्, डु by्गा द्वारा, लगभग minutes 45 मिनेट। १ Sunday आइतवार गिरावट हुन्छ त्यसैले डु tri्गाको यात्राको लागत .14.eयूरो र सौर्य डु boat्गा १.eयूरो छ। भाँडा १० देखि बिहान :7: .० सम्म हुन्छ। तपाईं पनि गर्न सक्नुहुन्छ रोमान्टिक बेलुन उडान र शैम्पेन को एक गिलास स्वाद।
म्याड्रिडमा धेरै कम्पनीहरू छन् जुन तातो हवाका बेलुनहरूमा यी उडानहरू गर्छन्, सामान्यतया, असेंबली, सुरूवात र अन्तिम दुई घण्टाको बीचमा: शून्य विन्ड बलून, एरोडिफुसिन बलुन राइड्स, एयरोटर्स म्याड्रिड, केहि हुन्। अर्को विकल्प, पहिले नै संवेदनशीलताको साथ चार्ज गरिएको छ, वरिपरि हिंड्नु हो हम्मन अल Andalus। दुई व्यक्तिको लागि मूल्यee यूरो हो र तपाई फेब्रुअरी and र १ between बीचको उपहार कार्ड खरीद गरेर यसको ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ।
हमान भनेको नाम जस्तै हो अरब नुहाउनु धूपको सुगन्ध, कम बत्तीहरू, तातो पानी र सुपर आराम संगीत संग। यसमा तीन पौंडी पोखरीहरू (तातो र चिसो पानीको साथ), स्टीम बाथ, मसाज क्षेत्र र चिया पिउन आराम गर्ने ठाउँ छ। यो बिहान १० देखि १२ बजेसम्म खुल्छ। अब जब म यसको बारेमा सोच्छु, तपाईं म्याड्रिडको एउटा रेस्टुरेन्टमा रोमान्टिक डिनरको मजा लिइसकेपछि तपाईं अरब स्नानमा अन्त गर्न सक्नुहुनेछ।
त्यहाँ धेरै छन् म्याड्रिडमा भ्यालेन्टाइन डे मेनूहरू प्रदान गर्ने रेस्टुरेन्टहरू। ती मध्ये एक हो ईनिग्मेटीयम: मैनबत्तीले डिनर, मनोरन्जनात्मक र जादुगरहरूसँगै प्रदर्शन, तीन कोर्स मेनू, पेय पट्टी, फोटोकल र फोटोग्राफिक रिपोर्ट सबै बेलुका (२०० भन्दा बढी फोटोहरू), मॉस नाइटक्लबको लागि टिकट र मोजिता र नजिक वीआईपी टेबल हुने सम्भावना राम्रोसँग कार्यक्रमको मजा लिन स्टेज।
यदि तपाईं केहि अधिक निजी र कम शोर मनपर्दछ भने, तपाईं अन्य रेस्टुरेन्टहरू प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, डेल सान्टियागो बर्नाबियू स्टेडियम। यहाँ धेरै रेस्टुरेन्टहरू छन् तर भित्र वास्तविक क्याफे उदाहरणका लागि तपाई आइतवार 9. .99eको लागि स्वादिष्ट ब्रन्चको साथ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। भ्यालेन्टाइन डे २०१ 2016 मेनूको साथ यी अन्य रेस्टुरेन्टहरूका नामहरू लेख्नुहोस्:
Wanda: मेनूको लागत २eयूरो, तीन पाठ्यक्रम, मिठाई, पेय र ककटेल। आदर्श वाक्य हो चुम्बन गर्नु सधैं राम्रो विचार हुन्छ.
२ चम्मच: भ्यालेन्टाईन मेनू बिहिबार, शुक्रवार र शनिबार (फेब्रुअरी ११, १२ र १ 11), खाजा र बेलुकाको भोजनको लागि हो। सबै धेरै रोमान्स र अविस्मरणीय स्वादहरूको साथ।
लाभेरोनिका: प्रेमीहरूको पार्टीलाई ध्यानमा राख्दै, मेनूले स्वागत ककटेल, पहिलो पाठ्यक्रम, दोस्रो कोर्स, वाइन, मिठाई र एक व्यक्तिलाई surprise 58 यूरोमा आश्चर्य उपहार प्रदान गर्दछ। र के बतख!
म्याड्रिड एकदम ठूलो शहर हो त्यसैले त्यहाँ वास्तवमै धेरै रेस्टुरेन्ट र क्याफेहरू छन् जसले विशेष मेनूहरू प्रस्ताव गर्दछ। अगाडि योजना गरेर तपाई पूरै दिनलाई विशेष बनाउन सक्नुहुन्छ।
बार्सिलोना मा भ्यालेन्टाइन दिवस
यहाँ सब भन्दा क्लासिक उत्सवहरू बाहिर खाँदा र फूलहरू र चकलेटहरू दिनुको साथ हो। यो पार्टी यस पार्टीको साथ मोहित शहर होईन एक महिना पछि, अप्रिलमा, सान जोर्डीको दिन यहाँ मनाइन्छ, सन्त जोर्डी को दिन, एक धेरै रोमान्टिक पार्टी पनि। त्यसो भए यो योजना त्यहाँका बासिन्दाहरूको लागि हो।
यदि कुनै कारणले तपाईं बार्सिलोनामा हुनुहुन्छ र तपाईं भ्यालेन्टाइन डे मनाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं फूलको सुन्दर गुलदस्ता र चकलेट बोनन्सको स्वादिष्ट बाकसको साथ दिन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ र रोमान्टिक लंच वा डिनरको साथ अन्त गर्न सक्नुहुन्छ। यी लेख्नुहोस् बार्सिलोना मा भ्यालेन्टाइन डे को लागि सिफारिश रेस्टोरेन्ट्स:
Torre d'Alta मार्च: यो १ 1929 २ in मा निर्मित पोर्ट Vell को केबल कार टावरको रेष्टुरेन्ट हो। दृश्य महान छ किनकी तपाई 75 92 मिटर अग्लो हुनुहुन्छ। यो सस्तो छैन, तर यसको आकर्षण छ। यसले गउरमेट र पेटिट गुरमेट मेनू, दिउँसो र रात प्रस्ताव गर्दछ: Tuesday २ यूरो म Tuesday्गलबारदेखि शनिबार र drinks२ यूरो, दुबै रक्सी बिना, दुवै।
ब्याकलाईट: यो राम्रो, रोमान्टिक बगैचाको साथ एक राम्रो रेस्टुरेन्ट हो। यसले मेडिटेरेनियन खाना बनाउँदछ र राम्रोसँग परिष्कृत हुन्छ। तपाईं यसलाई सारिआ छिमेकीमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ र तपाईंलाई मूल्यवृद्धिहरूको विचार दिनको लागि एपेटाइजरहरू and र २4यूरोको बीचमा हुन्छन्, rees र १ 28 यूरो बीचको एन्ट्रीहरू, पास्ता र भात भाँडो २० युरो र मासु २7युरो हुन्। , अधिक वा कम।
हो, बार्सिलोनामा भ्यालेन्टाइन डेको मजा लिन त्यहाँ अझ धेरै रेस्टुरेन्टहरू छन्। यदि तपाईं जानुहोस् फूल दिनुहोस् त्यसो भए तपाईको खरीद बनाउनुहोस् अउ नोम डे ला गुलाब, C / Ganduxer सडकमा, ड्याडाफ्लोर o La Ramblaउदाहरण को लागी। र यदि तपाइँ चकलेटहरू थप्न चाहानुहुन्छ चकलेट कारखानायसको कारीगर चकलेटसँग क्लासिक हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » स्पेन शहरहरू » बार्सिलोना » म्याड्रिड र बार्सिलोना मा भ्यालेन्टाइन दिवस कसरी मनाउने
सबै जसो तपाईं जहिले पनि एल रेटेरियो पार्कको बारेमा सोच्नुहुन्छ